व्यापार भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki भाग विनिमय
व्यापार भनेको के हो?
मानौं कि तपाईं कार किन्न चाहानुहुन्छ। यो सवारी ब्रान्ड नयाँ, साल-राउन्ड, साथै प्रयोग कारहरू हुन सक्छ। तपाईंको पुरानो कार के हुन्छ? यस सवारीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भाग विनिमय कुनै पनि अवस्थामा। यो पनि सत्य हो कि यी सवारी साधनहरूले सामान्यतया राम्रो राजस्व ल्याउँदैन, तर यो अझै यसको लायक हुन सक्छ। धेरै कार कम्पनीहरू महान परिस्थितिहरू प्रदान गर्छन्। यी कार घरहरू पनि पुरानो एक को लागि धेरै तिर्न तयार छन्। आज यो पनि छ कि आंशिक कारहरु लिइन्छ, जुन अब ड्राइभिङ्ग छैन।
तर यदि तपाईले आफ्नो बूढो मानिसलाई 2.000 यूरो सम्म पुर्याउनु भएको छ भने, तपाइँ जरूरी छ कि बाहिर बाहिर जानु हुँदैन। कारमा लागी र जम्मा रकम कमाउँदा तपाईं जान्नु हुन्छ कि तपाईले वास्तवमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ भने, त्यसबेला केहि पनि गलत जान सक्दैन र यो एक महान कार चयन गर्न सजिलो हुनेछ। त्यसोभए तपाईं चाँडै एक नयाँ गाडी पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई चरामा छोड्ने छैन र तपाईं निराश हुनुहुन्न। एक राम्रो नयाँ कार संग, धेरै मान्छे calmer हो किनकी तिनीहरूले रखरखाव को बारे मा केहि जान्न को आवश्यकता छैन। तिनीहरू एक्लै कारको मजा ध्यान केन्द्रित गर्न र नयाँ कार तिनीहरूलाई साथ ल्याउने सर्तहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार निश्चित रूप देखि तपाईं निराश नहीं हुनेछ, र यो पनि निश्चित छ कि आज नयाँ कार टेक्नोलोजी देखि भरा छ।
पहिले राम्रो जाँच गर्नुहोस्
यसको अर्थ तपाईंले खरीद नगर्ने र चाँडै नयाँ कारको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ। यो कार निश्चित रूपमा तपाइँलाई निराश तुल्याउनेछैन र लामो समयको लागि त्यहाँ हुनेछ। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई नियमित रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। व्यापार-इन व्याख्या गर्न सजिलो छ, तर यसले अन्य वस्तुहरूलाई पनि उल्लेख गर्न सक्छ। यदि तपाइँ नयाँ वाशिंग मशीन किन्नको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि व्यापार-इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई अहिले नयाँ वाशिंग मशीनलाई भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले वातावरणको लागि केही राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। बस सोध्नुहुन्छ जसले पुरानो उपकरणको यस्तो व्यापार प्रस्ताव गर्दछ। तिनीहरू सामान्यतया तपाई अधिक संदिग्ध हुन्छन्। त्यसैले तपाई निश्चित रूपमा यस विषयको बारेमा सूचित हुन नबिर्सनु हुनेछ। प्रायजसो ग्राहकहरू पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छन् र केहि अरू भन्दा बढीको लागि तत्पर हुन्छन् जुन उनीहरूले केही पैसा बचत गर्न सक्छन्। यो अहिले तपाईंसँग हुन सक्छ। एक व्यापार मा एक राम्रो कुरा हो, जो निश्चित रूप देखि धेरै लाभ हुनेछ। धेरै चीजहरूको लागि यो निर्णय गर्न सजिलो छ। तपाईले पनि यो गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ यस्तो प्रस्ताव छ भने तपाईंलाई संकोच गर्न र चाँडै नै सकेसम्म कार्य गर्नु हुँदैन। किन्न तपाई भर्खर नयाँ वॉशर प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईंको पुरानो जम्मा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसको मतलब तपाईले पुरानो यन्त्रको सीधा अतिरिक्त स्थान र रिसको आवश्यकता बिना पनि निषेधित गरेको छ।
कसको लागि व्यापारिक उचित सार्थक हो?
त्यसैले यो एक व्यापारको लायक छ जो कोहीको लागि केहि नयाँ चाहन्छ र थाहा छैन जहाँ पुरानो उपकरण वा पुरानो कार संग जान्छ। तपाईंले केहि नयाँ किन्नु अघि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, धेरै जसो यसको साथ यो एक व्यापार सम्झौता को विज्ञापित गर्दछ। त्यसैले तपाई सीधा जान्नुहुन्छ कि कहाँ व्यापारमा जानुहुन्छ। त्यसो त केवल हेर्नुहोस् र व्यापार भित्रको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्। पक्का, त्यहाँ तपाईंको क्षेत्रमा डीलहरू पनि छन् जसले यस्तो सेवा प्रदान गर्दछ र तपाईंको लागि कुनै समस्या बिना।
दर्जा: 3.0/ 5। 1 मतदान बाट।
अघिल्लो लेखपूरक वित्त